စာဖတ်ချိန်: 10 မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 14/05/2020)
ကျနော်တို့စတင်ခင်မှာ, ဥရောပအကောင်းဆုံးရထားခရီးသွားမှတဆင့်ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်အတိအကျဘာကြောင့်မယ့်ကိန်းဂဏန်းထွက်ပါစေ- နောက်ဆုံးတော့, ဒီတိုက်ကြီးနှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မူလနေထိုင်ရာထားပြီး, အရာသည်၎င်း၏အခြေခံအဆောက်အအုံမကြာခဏအလွန်အမင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အခြား Modes သာလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်မီးရထားခရီးသွားလာ၏ခမ်းနားသှေးဆောငျအတှကျကဆိုပါတယ်ခံရဖို့တစ်ခုခုရှိမယ့်. ဒါဟာပထမဦးဆုံးအချိန်ခရီးသွားများအတွက်များအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်, who can take advantage of train schedules to hop on board just before it departs. ဤသည်ဥရောပရဲ့လေဆိပ်မှနက်ရှိုင်းသောဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်, ထွက်ခွာရှေ့၌သင်တို့နိမ့်ဆုံးရောက်ရှိချိန်အနည်းဆုံးနှစ်နာရီသည်အဘယ်မှာရှိ, သင်လေဆိပ်တည်နေရာခရီးသည်အပိုဆောင်းအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံဖြုန်း.
မီးရထားဘူတာလည်းအဆင်ပြေအဓိကခရီးသွားနေရာများနှင့်ဆွဲဆောင်မှုမှတည်ရှိလျက်ရှိ၏အားသာချက်ရှိ, so it’s easy to step off your train and head directly to your destination.
ကျနော်တို့ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့င့်အဖြစ်, ရောင်းစျေးသတ်မှတ်ကွဲပြားမှုများသင့်ရဲ့ခရီးသွားရက်စွဲများအရသိရသည်, ရရှိနိုင်မှုဖွင့်လှစ်တစ်ချိန်ကသင်စာအုပ်ချင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်. If you book far enough in advance, သငျသညျအကွောငျးကိုလစာမှရှာနေပါလိမ့်မယ် 55 ဒေါ်လာတလမ်း, သို့မဟုတ် 90 ဒေါ်လာအသွားအပြန်. ပြီးခဲ့သည့်တစ်မိနစ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းနေစျေးနှုန်းများကောင်းကင်ပြာမြင့်မောင်းနိုင်ပါတယ်, ကုန်ကျစရိတ်နီးပါးအကြာတွင်သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ဝယ်ဖို့နှစ်ဆနှင့်အတူ. ဤသည်အသွားအပြန်နဲ့ One-လမ်းလက်မှတ်တွေနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအမှန်.
သငျသညျရောက်လာပြီးတာနဲ့, သငျသညျထိုမွို့၏စိတ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်လိမ့်မယ်, စားစရာဘို့ရွေးချယ်စရာများစွာနှင့်အတူ, စျေးဆိုင်များနှင့်အချိုရည်. သင်ဘူတာစွန့်ခွာဖို့ရှေးခယျြခဲ့လျှင်, သင်အနီးအနား Brasserie Terminus Nord တွေ့ပါလိမ့်မယ်,afamous Art Nouveau style restaurant directly across the road from the train station. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သငျသညျဥရောပအကောင်းဆုံးအစားအစာနှင့်အချိုရည်အချို့ကိုတွေ့ရှိရန်ရိုးရှင်းစွာဆိုဦးတည်လှည့်လည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
Asaholder of the Eurostar direct train ticket, သငျသညျအကြိုးစီးပှားကိုနိုင်နေ2အဘို့ 1 သူတို့အားပြတိုက်များနှင့်ပြခန်းအများအပြားဝင်ရောက်ခွင့်, ရာသငျသညျဒေါ်လာရာပေါင်းများစွာကိုကယျတငျနိုငျ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-paris-train%2F%0A - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)